'1984' Ga-abụ obere oge AHS mgbe - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ '1984' Ga - abụ oge kachasị mkpụmkpụ AHS
'1984' Ga - abụ oge kachasị mkpụmkpụ AHS
edere ya Timothy Rawles October 31, 2019
Fọdụ nwere ike ịmasị ya, ụfọdụ nwere ike ọ gaghị amasị, mana AHS: 1984 ga-enwe oge mmechi ya na Nọvemba 14, na-eme ya kasị nso oge maka usoro a.
1984 bụ echiche dị egwu ebe ọ bụ na Roanoke, ụfọdụ ọbụna na-atụ aro ntụgharị afọ a bụ na ihe niile bụ n'ezie ihe nkiri VHS.
Ugbu a n'oge nke itoolu, 1984 amalite dị ka ihe ịtụghasị azụ maka afọ iri nke neon, na-enweghị otu, mana abụọ ndị na-egbu mmadụ na-agbaso ndị ndụmọdụ na-ama ụlọikwuu site n'ọhịa n'ọgba ochie a gbahapụrụ agbahapụ nke ga-emeghere ụmụaka n'echi ya.
Dị ka a na-atụ anya ya n'ụgbọ mmiri ọkụ, a na-ewepụta ndị ndụmọdụ n'otu n'otu n'otu ụzọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere oke ọbara dịka o kwere mee.
E kewara ndị na-akwado ya n'ihi na dịka n'ọtụtụ imepụta Murphy, ihe anaghị adịkarị ka ha dị ka ọ dị ka ọ na-edozighi ndị ezigbo ndị na-egbu ya bụ, na-agbanye usoro a n'ụdị ntụziaka niile.
Site na nkenke ya, ndị na-achọ azịza ga-echere naanị izu ole na ole.
Na ntule, Lọ igbu ọchụ nwere 12 ngosipụta, Ebe nchekwa nwere 13 ngosipụta, Ọgbụgba ndụ nwere 13 ngosipụta, Freakshow nwere 13 ngosipụta, Hotel nwere 12 ngosipụta, Roanoke nwere 10 ngosipụta, Okpukpe nwere usoro 11, na apocalypse nwere oge 10.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị isi egwuregwu anaghị anọ n'oge a: Kathy Bates, Sarah Paulson, Lady Gaga, ọ na-enye ndị ọzọ ohere ịpụta na ọnọdụ ha. Pụrụ iche dee kwesịrị Gus Kenworthy na Pose si Angelica Ross.
American Horror Story airses Thursday na 10 pm na Fox. Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ.
Lupita Nyong'o na-elegharị anya na agwa sitere na 'US' ma na-egwu egwu nke 'Halloween Horror Night'
Lelee Trailer maka Mmegharị Netflix nke 'The Witcher'